inogadzirira Mac yeOS X El Capitan 10.11 | Ndinobva mac
Matanho ekutanga kutora usati wasvika OS X El Capitan 10.11
Rimwe remabasa atinofanira kuita tisati taita kuisirwa kana kugadzirisa kweiyo Mac inoshanda sisitimu hapana mubvunzo ita kuchenesa nekuchengetedza yeaya data kana magwaro akakosha atinawo mumuchina wedu.
Kuita macomputer edu, chinhu chakanakisa uye chakakurumbira ndeye yekare inozivikanwa Time Machine, asi isu tinogona kugara tichiita mabhakopu kunze kweTime Machine pane yekunze hard drive kana yakafanana, izvo zviri kune yega yega. Usati waita backup Chinhu chekutanga kubvisa zvese zvatisingashandise, kungave kuri kunyorera kana magwaro uye ichi ndicho chikonzero chekutanga patsoka yekurudyi mune inotevera OS X.
1 Gadzira backup
2 Bvisa izvo zvinoshandiswa uye zvirongwa zvatisingashandise
3 Disk Mvumo Kugadziriswa
4 Tarisa mashandisiro atinoshandisa
Iri idanho rinoti vazhinji vashandisi haridiwe sezvo Mac iri yakachengeteka chaizvo uye isingarasikirwe neruzivo kana OS X yagadziriswa, asi isu tinofanirwa kuve pachena kuti kana isu tichivandudza mashandiro isu tiri neimwe nzira 'kugadzirisa' muchina wedu. Kunyange chiri chokwadi kuti kazhinji hapana matambudziko ekurasikirwa mugwaro muOS X, zvinogara zvirinani kuve ne backup mune yedu Nguva Machine pazvinhu zvese zvinonyanya kukosha.
Iko kune sarudzo yekushandura backups kubva kuTime Machine chishandiso pachayo, asi usati wagadzirisa zvinokurudzirwa kuita izvi backup pamurume. Chandinokurudzira ndechekuti uve nechero imwe 'backup' yeayo ese magwaro akakosha kungave pane yekunze hard drive kana yakafanana kudzivirira matambudziko.
Bvisa izvo zvinoshandiswa uye zvirongwa zvatisingashandise
Iyi ndiyo yangu 'yakakosha nhanho' apo ini ndichaenda kuisa nyowani yekushandisa system pane yangu Mac. Mazhinji emapurogiramu kana mashandisiro atino dhawunirodha uye atakaisa paMac yedu haatomboashandise, saka isati yasvika iyo vhezheni itsva inguva yakanakisa yekuchenesa nekuchengetedza nzvimbo pane yedu hard drive.
Disk Mvumo Kugadziriswa
Imwe yenhanho dzinotariswa nevakawanda vedu kuwedzera kune yapfuura uye zvakare yakakosha kuti uite usati waisa OS X nyowani. Kunyangwe chiri chokwadi kuti ini ndinokurudzira kuita izvi nguva zhinji kuchengetedza iyo Hard Drive mune yakanaka , apo Tichaisa sisitimu nyowani yekushandisa, inokurudzirwa zvikuru usati waita ichi chinhu chakareruka kubva kuDisk Utility, tinogona gadzirisa basa iri. Kana basa iri rangoitwa tinokwanisa 'kudurura marara' kuti tiwane zvese zvakakwana uye nekurairwa zvakanaka padesktop.
Tarisa mashandisiro atinoshandisa
Usati watanga kuvandudza pasina imwe ado, tarisa kuti mapurogiramu ese uye maapplication aunoda anotsigirwa neOS X El Capitan 10.11. Ichokwadi kuti izvozvi hazviitike zvakanyanya sepakutanga, asi fungidzira kuti iwe unovandudza yako OS X uyezve haugone kushandisa chero chishandiso kana chishandiso chebasa rako rezuva nezuva.
Vazhinji vashandisi vasingafanire kukwikwidza bvunzo dzekushandisa uye zvimwe zvigadzirwa, maitiro atingaite, tinogona kugadzirisa vhezheni itsva yeApple's operating system pamusoro peyayo yazvino vadzikama, funga izvo Apple haitauri kuti isu tinofanirwa kuita 'fomati' yeMac yedu kuisa vhezheni itsva yeOS X ichi chinhu chinowanzoitwa kana tiine matambudziko kana kutadza kwerumwe rudzi mukomputa yedu.
Izvo zviri pachena ndezvekuti Apple ichatangisa iyo yepamutemo vhezheni ye OS X El Capitan mangwana uye ndosaka zvakanaka kutora nguva uye siya Mac agadzirira nekopi yedu yekuchengetedza, kugadzirisa mvumo uye mamwe matipi ekudzivirira matambudziko mune ramangwana uye kwete kutakura zvikanganiso kubva mushanduro dzekare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » OS X El Capitan » Matanho ekutanga kutora usati wasvika OS X El Capitan 10.11
Iyi os x inoshanda sisitimu inorwadza yekumutsiridza kana mafaera asisipo muappstore, pasina chikonzero michina yakashata inodhura zvakanyanya. zvinopisa tsitsi sei
Apple inoburitsa yechipiri beta yeOS X El Capitan 10.11.1 yevagadziri
OS X El Capitan, inowanikwa mangwana seyakagadziriswa yemahara